Trailer - Avenger 4 EndGame - ewa.mg
Trailer – Avenger 4 EndGame
Cinéma - News - Ao Raha
Eo am-pamaranana ny fanodinana sarimihetsika voalohany vokariny ny Métatron Production, eny Mahitsy. Tantara mitondra ny lohateny hoe “Tsio-drivotra”. Miala amin’ny mahazatra ny votoatiny satria hanasongadina ny olam-piarahamonina ateraky ny tsy fitovian’ny fanajana ny soatoavina malagasy any ambanivohitra sy an-drenivohitra ankehitriny, raha ny fanazavan’i Maminiaina Johnny, talen’ity trano famokarana ity. Mpilalao sarimihetsika avy amin’ny toerana ivelan’ Antananarivo ny ankamaroan’ireo dimy ambin’ny folo notsongaina hamelona ny horonantsary “Tsio-drivotra”, izay hivoaka tsy ho ela. Ho fampivelarana ny talenta vao misondrotra no antony, araka ny fantatra. Tazana ao anatin’ity tantara ity ihany koa ny mpanakanto Nhodas, izay misehatra amin’ny mozika mafana. L’article Horonantsary vaovao est apparu en premier sur AoRaha.
Cinéma - News - News Mada
Métatron Production: hamoaka ny sarimihetsika « Tsio-drivotra »
Eo am-pamaranana ny fanodinana sarimihetsika voalohany vokariny ny Métatron Production, eny Mahitsy. Tantara mitondra ny lohateny « Tsio-drivotra ». « Miala amin’ny mahazatra ity ny vontoatiny satria hampivoitra ny olam-piarahamonina ateraky ny tsy fitovian’ny fitandroana ny soatoavina malagasy ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe amin’izao fotoana izao », raha ny fanazavan’ny talen’ny trano famokarana Métatron production, i Maminiaina Johnny. Mpilalao sarimihetsika avy amin’ny toerana ivelan’ny Renivohitra ny ankamaroan’ireo 15 notsongaina hamelona ny horonantsary « Tsio-drivotra » izay hivoaka ato ho ato. Anisan’ny antony nahatonga izany ny ho fampivelarana ny talenta vao misondrotra. Tazana ao anatin’ny tantara ihany koa anefa ny mpanakanto toa an’i Nhodas. Safidin’ity trano mpamokatra ity ny hanasongadina ny maha Malagasy, hisorohana ny fahaverezan’ny soatoavina ao anatin’ny firoboroboan’ny kolontsaina vahiny entin’ny fanatontoloana. Nanangona : HaRy Razafindrakoto L’article Métatron Production: hamoaka ny sarimihetsika « Tsio-drivotra » a été récupéré chez Newsmada.
Top Gun 2 : ny antony nanemorana ilay film
Tamin’ity 2018 ity dia rentsika ny hivoahan’ny Top Gun 2, efa noheritreretina hivoaka ny lohataona 2019 izany, kanefa dia nahemotra erin-taona ; nefa tsy dia fantatra loatra ny antony. Ny gazety anglisy The Sun dia manome fanazavana bebe kokoa : i Tom dia maniry, alohan’ny hanombohan’ny tournage, ny hianatra hitondra avion de combat ! Izy amin’izay no ho mpilalao sarimihetsika voalohany teo amin’ny tantaran’ny cinéma ny tena hitondra Jet rehefa manao film. « Efa fantatra i Tom fa izy foana no manao ny cascadeny, ary ho torak’izany koa amin’ny Top Gun » hoy ny olona iray akaiky azy niresaka tamin’ny gazety, ary nanampy izy hoe : « ho reharehany manokana ny hanatanteraka ny action manakaiky ny tena izy. Tsy hanao an’izy rehetra anefa izy satria tena misy mampidi-doza tokoa ny cascade sasany ao amin’ilay film, fa hanao maromaro amin’izany izy. » Efa azontsika ho hita miha fotsy sahady ny volon’ireo olona ao amin’ny assurance … Mandrapaha aloha dia ity ny Trailer Top Gun 1
Efa misy daty ny Game of Thrones saison 8
Nandefa Trailer voalohany i HBO ho an’ny saion farany an’i Game of Thrones tamin’ny talata teo, ka tao ry zareo no nilaza fa ny aprily 2019 no hanombohany. Ny chaine HBO dia nanambara amin’izay ny daty hiverenan’ny serie be mpiandry indrindra Game of Thrones. Ilay seria namboarina avy amin’ny boky nosoratan’i George R.R. Martin dia ho atomboka ny volana aprily ho avy izao. Volana vitsy izany siasa no iandrasana. Daty sy Trailer iray, fanomezana alohan’ny noely Mba hanaarahana izany fanambarana izany dia nandefa trailer iray tokony ho 30 secondra teo i HBO, izany dia efa nisy nijery mpijery antampitrisany. Teo amin’ny Twitter, ilay post nanambarana izany dia efa nahazoana « j’aime » 2 hetsy sy retweets 2 alina sy 1 hetsy tao anatin’ny 18 ora monja. Ilay Trailer dia tsy manambara n’inon’inona ny amin’y zavatra mety hitranga, ankoatry ny hoe efa tonga amin’ny fara-tampony ny ady ho an’ny Seza Fiandrianana. Mamerina mampiseho ny fotoana nanamarika ny saison 7 taloha ihany koa izany trailer izany. Mba hamaranana tsara ity tantara ity dia hita tao i Ned Stark, ilay mpanampaka tao Winterfell.
Trailer – The Hate U Give
Film mandona mikasika ny herisetran’ireo polisy miaraka amin’i Amandla Stenberg Jereo ny trailer-n’ny The hate U Give, film amerikana mandona mikasika ny herisetran’ireo polisy izay manozongozona an’i Etazonia nandritra ny taona vitsivitsy izay. Tao aorian’ny nahafatesan’i Oscar Grant tany Fruitvale Station tamin’ny 2009 no nanoratan’i Angie Thomas (izay mbola mpianatra tamin’izay) tantara kely mikasika ny herisetran’ireo Polisy amin’ireo mainty hoditra any Amerika. Taona vitsy taty aoriana, raha nandalo toe-javatra maro mitovy an’izany ny amerikana izay nahatonga ny fiforonan’ny fanoherana Black Lives Matter, dia nanapa-kevitra ity tovovavy ity ny hamadika ilay tantara kely ho Boky mba hamoahany ny fahatezerany rehetra. Nivoaka tamin’ny 2017 izany boky izany « The hate you give us » ary dia tena nalaza tokoa. Nalain’i Hollywood haingana ny zo ahafahana mamokatra azy ho horonan-tsary. Izany oronan-tsary notontosain’i George Tillman JR izany no hitantsika amin’ity trailer voalohany ity, raha adika tsotsotra ny lohateniny fdia hoe : « ny fankahalana homenareo ». Ilay film dia mitantara ny tantaran’i Starr, mpianatra iray izao nahita maso ny namonoan’ny polisy ny namany hatramin’ny mbola kely. Ao anatin’ny faneren’ireo manodidina azy i Starr ka voatery mila mitady ny lalany ka hiady ho an’izay marina. Ny sary vitsivitsy aseho eto dia ahitana fa ho tena tsara ity film ity.
Trailer : Transformers 6 – Origins – Bumblebee
Hivoaka ny faha 21 Desambra izao any Etazonia ny horonantsary "Bumblebee" izay andihany faha enina amin'ilay horonantsary "Transformers". I Travis Knight no talen'ilay sarimihetsika, Christina Hodson no nanoratra ny tantara. Ny mpilalao an'ilay sarimihetsika dia Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Jason Drucker, and Pamela Adlon. I Dylan O'Brien kosa no manao ny feon'i Bumblebee. Io no Transformers voalohany tsy notantanan'i Michael Bay na dia mbola mpamokatra ihany aza izy amin'io filma io. Roapolo taona talohan'ny zavatra hita tamin'ilay sarimihetsika voalohany tamin'ny taona 1987, i Bumblebee dia niafina tany amin'ny tanana amoron-dranomasina kely tao Kalifornia. Tao amin'io toerana io izy no nahita an'i Charlie Watson zatovo vavy iray. Nanenjika azy roa ireo ny sampana iray ao amin'ny governemanta antsoina hoe "Secteur 7", izay tarihan'i "Agent Burns". Raha nitsoaka ny fiarahamonina izy ireo dia nahita ry zareo fa tsy i Bee irery ihany no Transformer teto an-tany ary ny sasany amin'ireo Transformers ireo dia tsy namany akory. Ito ambany ito misy santionany alohan'ny hijerena manontolo an'ilay film.
« International documentary film festival »: efa any Amsterdam i Tsikivy sy Razanamalala
Manana solontena tanora roa: Razanamalala Christella, 16 taona, sy i Maka Tsikivy, 23 taona, i Madagasikara amin’ny hetsika « One minute junior awards ». Famokarana horonantsary fohy tontosain’ny ankizy na tanora mirakitra ny zavatra iainany andavanandro na koa ny nofinofiny ny “One minute junior awards” ahafahany mitondra ny feony. 15 ny isan’ny hiatrika ny famaranana any Amsterdam, nanomboka ny 14 novambra lasa teo ary hifarana rahampitso. Efa any an-toerana izy mianadahy ary miandry ny vokatry famaranana. Manohana ny fanatanterahana ny fifaninanana sy manao tantsoroka ho an’ny ankizy vonona handray anjara ny Unicef. Nampivoitra ny fiainan’ny ankizy any amin’ny faritra atsimo ny votoatin’ny horonantsary novokarin’izy mianadahy. Nahasarika ny mpitsara manokana ny sanganasan’i Tsikivy, nomeny ny lohateny « Raha izaho no filoham-pirenena ». Alefa ao anatin’ny hetsika “International documentary film festival IDFA” ireo horonantsary 15 hiatrika ny famaranana ary hisongadina izay mendrika ka ho voasokajy ho voalohany. Telo ny sokajin’ny loka hozaraina amin’izany. Olona efa matihanina amin’ny tontolon’ny sarimihetsika Gover Meitn Larissa Koekkoek… no hitsara ireo sanganasa rehetra. Vonjy A.
Spike Lee nampifamadihana tamin’i Stan Lee
Nampifamadihan’ny olona tamin’i Stan Lee, nandà ny fahafatesany i Spike Lee "Velona soa aman-tsara aho!", hoy ilay mpanantontosa tamin’ny Instagram. Lasa nalaza tampoka omaly ny teo amin’ny gazety néo-zélandais Gisborne Herald, satria afaka vakiana hoe « Maty tamin’ny 95 taona i Spike Lee ». y sary dia ny an’i Stan Lee tokoa, ilay mpamorona super héros marvel maro izay maty tamin’ny alatsinainy, fa efa navoaka ilay izy. Voatery ilay mpanantontosa 61 taona ny handà ny fahafatesany. Teo amin’ny compte Instagram, nozarainy ilay sarin’ilay gazety ary nilaza izy fa « velona soa aman-tsara ». « Andriamanitra anie hitahy ny fanahin’i Stan Lee, fa ny anahy aloho, mbola aoka aloha .», hoy ilay mpanantontosa ny Do The Right Thing et Blackkklansman. Jeremy Muir, ilay mpanoratra ao amin’ny Gisborne Herald, dia niala tsiny ho an’izany fahadisoana izany, ka nilaza fa tena « mahamenatra izany » ho an’ny endrika asehon’ity gazety ity, izay nisy hatramin’ny 1874. « nampihomehy ny olona izany, dia tsy maninona, fa tena mahamenatra. Fahadisoan’olom-belona izany. »